Nzira Yokuita Kuti Kufamba Kunze Zvishoma | A Couple for the Road
Maitiro Ekuita Kufamba Kwakareruka
Isu tose tinoda kufamba kuenda nyore, asi dzimwe nguva hazvisi. Dzimwe nguva hazvizorori, kana kunakidza. Dzimwe nguva, chaizvoizvo, zvakaoma uye zvinokanganisa.
Kusafadza kunofamba ndiko kwakanyanya kunaka, uye chimwe chinhu chiri, dzimwe nguva, chisingadziviriki. Takava nenguva iyo inopesana, kana chokwadi chechiitiko chisingawirirani nezvatinotarisira uye kufara, kana kana chimwe chinhu parwendo rwedu chinopera zvachose. Kune avo vanoda muenzaniso, endai kwete kupfuura isu kutanga kuenda kuParis. Adzidza chiFrench muchikoro chesekondari uye anofungidzirwa La vie en Paris, vachigadzirisa zvinhu zvose kubva pakuita kwangu croissant angadavira kutsika-famba Arc de Triomphe, Ndakanga ndavaka Parisi muClassius mupfungwa dzangu.
Ichokwadi chakanga chakasiyana chaizvo. Kwete iyi ndiyo chete yekutanga rwendo rwandakaenda kune dzimwe nyika neTracy, asi rakapindirwa mupfungwa dzangu kuti hapana nzvimbo inogona kuwirirana neParis. Saka unimpeachable yaiva Paris se ari nzvimbo yekuve iyo ndakaikurudzira mune chimwe chinhu chaisagona kurarama kusvika-uye haina. Kune nzira uye zvinhu zvinoita kuti kufamba kuve nyore, zvakadaro.
Tine njere yekufamba zvakakwana kuti tidzidze zvakawanda, uye kazhinji zvidzidzo izvi zvave zvishoma nezvekufamba uye zvimwe pamusoro pedu. Kufamba kunokudzidzisa pamusoro pezvaunotarisirwa, nezvechokwadi, pamusoro penguva dzinofadza, asiwo dzimwe nguva. Izvo iwe usingaverenge nezvazvo muConde Nast kana kuti uone kufananidzwa paChanyo Chekufamba. Hapana munhu anongotaura nezvema nguva apo kufamba hakurarama maererano nezvamunotarisira, kana kuti kunokubatsira kunzwisisa kuti sei iwe wakanga uine manzwiro makuru ekusava nehanya pamakumbo ako okudzoka.
Zvakatora zviitiko zvakakura zvakawanda, asiwo vashoma vashoma, kuti vazive zvokuita uye izvo zvisiri kuita. Uyezve, tave tichikwanisa kuona kuti nei vanhu vazhinji chaizvo vachirega kusiya kana vachangotanga, uye kuti vanoita sei kufamba nyore.
Mukuru munyori weBritain weChristmas muzana remakore rechipiri Samuel Johnson akanyora, "Tinoda kutarisira, uye apo tarisiro inogona kuodzwa mwoyo kana kugutsikana, tinoda kuva zvakare kutarisira." Zviri mumamiriro edu ezvinhu kuti tive netarisiro, kuti tive nemafungiro pamusoro pevanhu, nzvimbo, kana zvakaitika, asi tinofanira kufuratira izvi zvinotarisirwa kana zvasvika pakufamba. Isu tinoita izvi muhukama hwedu - kana mumwe wako ane tarisiro dzisingatarisirwe dzomumwe, kuitira kuti mumwe wacho asakundikana. Ndiani anogona kukwanisa kutarisira zvakakwirira zvakadaro?
Ichokwadi ndechokuti mumwe nomumwe wedu anogona kuisa zvinotarisirwa zvakanyanya zvokuti haaswedereki kune chero nzvimbo ipi zvayo, pasinei nokuti yakakura sei, zvisinei kuti inoshamisa sei. Pfungwa yekushanya kubudirira haisi kutarisira, asi ubanguranyika. Uyo anotarisira achiti "Ndichaenda pano nokuti ndinofunga kuti ichava nemafungiro aya, sezvandakavaka mupfungwa dzangu kuva neni kwete akazviziva pakutanga ". Muongorori anoti "Handina zvatinotarisira, asi ndinoenda kunotsvaka kuti chii chiripo".
Mune imwe pfungwa yakajeka, isu tinoshandiswa nezvatinonzwa uye tinoverenga, uye izvo zvinoshandiswa zvinogara zvichishandurwa kuva matikiti epane ndege nehotera kana hostel kuchengetedza. kuti shamwari yako inotaura nezvayo Peru inogona kuvhura pfungwa yako kuenda ikoko, asi chii iye anoti rinodisa mufananidzo wako uye rinotanga kuvaka zvatinotarisira. Kana shamwari yako ichitaura kuti yakakura, yakakwana, inonzwisisika uye inofadza, chokwadi ndeye kune shamwari yako. Kana iwe kana iwe usina chiitiko chakafanana kunobva pane zvaunofarira, zvaunoda uye zvisingadi, uye pakupedzisira zvinotarisirwa.
Iwe haufaniri kuisa nzvimbo yakakwirira kwazvo kune imwe nzvimbo yausina kumboona, uye iwe unofanira kuenda kundotsvaga pane kuenda tarisira. Mune izvi, iwe uchazvibvumira kushamisika uye kuita kuti kufamba kuve nyore, asiwo unoonga zvose zvakanaka kwose kwaunoenda.
Kufamba Ndiko Woga
Zvine chokuita nepfungwa yapfuura ndeyekuti kufamba ndiko chiitiko chako pachako, uye haugoni kutarisira kuva nechiitiko chimwechete kune mumwe munhu. Zvichida shamwari yako kubva pamuenzaniso wepamusoro yakada Peru nokuti iye ari nyanzvi yemasango, kana munyori wenhau dzakaitika anofarira kuverenga pamusoro peInan tsika. Kana ukasarudza irody pubs, mabhizimusi, kana nzvimbo dzose dzakabatanidzwa, haugoni kutarisira kuva nemafungiro akafanana kune imwe nzvimbo semumwe munhu. Iwe haugoni kuva nemafungiro akafanana se munhu saizvozvo.
Yeuka kuti kufamba kune munhu. Hapana, iwe, kare, munhoroondo yevanhu, wakambova nechiitiko chakafanana mune imwe nzvimbo yawakave nayo. Zvinoshamisa, handizvo here? Zvakaitika kwauri, pasinei nokuti unoenda kupi, ndezvako zvako. Kana iwe uchida kuti kufamba kuve nyore, zvinzwisise iwe kutanga uye unzwisise zvaunofarira. Hauna zvinotarisirwa maererano nezvinodiwa nemumwe munhu. Izvi zvinogona kuva zvakanaka kana zvakaipa, asi kana uchitenda iwe uchange uine ruzivo rwakadaro semumwe munhu ane zvido zvakasiyana newe pane imwe nzvimbo, iwe uchazoora mwoyo zvakare nekuda kwekutarisira zvisakarurama.
Kutya rufu rwechimwe chinhu chine chinangwa. Kutya rufu rwemufaro, uye nekuzaruka kwekuva nemweya. Kune vamwe, kutya kunoshamisa kunogadzirisa uye kunovadzivisa kuti varege kuziva zvavanofamba zvinogona kuita. Zvimwe zvinhu zvinotoda kutyisa, asi hapana chinofanira kutya. Icho chisinganzwisisiki chisingatauri kunze kwekutya.
Hazvina mhosva kuti kutya kwako chii, uye kuti kunobatsira sei kufamba kwako, kunogona kukundwa. Kutya zvikomo zvinogona kukunda nyore, sezvandinazvo. Kutya kwangu kwekubhururuka kwakanditungamirira kuti ndirege basa rakavimbiswa zvikuru mumakore ekutanga angu uye ukama hwaTracy, sekuda kwese kwandakanga ndaenda ndaizova chena uye ndakarwara. Kutambudzwa kwakaputika pfungwa dzangu kusvikira ndisingakwanisi kuzviita zvakare. Kufunga kuti ndakaita sarudzo yakadaro ikozvino inoratidzika sehupenyu hwakasiyana, ndakakunda kutya kwangu, asi kusvikira ndatarisana nayo ingadai isina mubvunzo kutonga upenyu hwangu.
Tinogona kutya zvinopfuura kungofamba. Tinogona kutya vamwe vanhu, dzimwe tsika, uye mamiriro asina kujairika izvo zvichatidzivisa kuva nehupenyu hwechokwadi. Apo Tracy naI vakati takaenda kumwoyo weMexico, vazhinji vehama dzedu vaishamisika kana yaiva pfungwa yakanaka kudaro. Taiziva kuti yakanga yakachengeteka, asi vazhinji vaisazoenda kuMexico, vachikwereta motokari uye vanonzwa vakasununguka kutyaira. Takaita tsvakurudzo yedu, takasarudza kuti yakachengeteka, yakaronga nzira yedu, uye yakaderedza kutya.
Kana ukasarudza parwendo, iwe unogona kufamba zvakanaka usingatungamiri kutya. Iwe unofanira kukanda kunyevera kwose kumhepo uye kufamba-famba wakakomberedza Lima usiku neine gaudy zvishongo here? Izvozvo zvingave zvimumumu. Zvechokwadi tinoda kuva nemafungiro, asi tisingadi kuedza chimwe chinhu chitsva, kufamba hakuzokupi mubayiro sezvazvakakodzera.
Iwe Unoshandisa Mari Yakanyanya Kuwanda
Tinoziva kunzwa uku kuri nani pane vakawanda, sezvatinoenda maawa mashomanana okutanga tisina kungoziva maitiro ekugadzirisa kufamba. chinhu chose zvinoita sekutengesa kutenga, kubva kune zvikwereti uye zviyeuchidzo zvekudya kwehafu yeawa imwe uye kutengesa kwekukwikwidza kwekukwikwidza, kufamba kunotitorera mari kune isu mari.
Hapana chakaipa kudarika kuuya kumagumo ewendo, uchida kufara iwe asi kuziva kuti wakawana chikwereti, kana kuti iwe unenge wakanyatsosungirirwa kusvikira iwe unotevera kubhadhara zuva. Nzira chete yekukunda nayo iyi ndeyekudzidza maitiro ekugadzirisa kufamba, uye kunzwisisa kuti sei kufamba kunodhura sezvazviri.
Funga nezvazvo - iwe unopedza zvakawanda mukati mevhiki here kana pakupera kwevhiki? Kune ani zvake anoshanda mukati mevhiki, iwe unopedza zvakawanda pavhiki. Ehe saizvozvo. Kana iwe ukashanda-mazuva, uye wava neMuvhuro neChipiri? Ndiyo vhiki yako yevhiki. Iwe unopedza zvakawanda ipapo here? Chokwadi iwe unodaro. Kufamba ndeimwe nguva yakareba, inopfuurira mavhiki. Uyezve, inguva yakareba yevhiki vhiki yaunenge usina zvimwechetezvo zvekudya zvauri kuita kumba, iwe unenge usina motokari, uye iwe hauna varaidzo chaiyo kwaunogara. Iwe unofanirwa go pane imwe nzvimbo yezvose.
Nepo kune nzira dzakawanda dzekuchengetedza mari paunofamba, kunzwisisa kunorapa sezvinoenderera mberi kwevhiki yekupedzisira ndiyo inokosha. Ziva kuti une mugove yenguva yekuzadza, uye nguva yakawanda yekuzviita, asi iva akachenjera pamusoro paro. Tsvaga "zvinhu zvokusununguka zvokuita"Muguta rako rakasarudzwa, sezvatakaita muAmsterdam. Tsvaga kuti mapaki aripi. Tenga zvokudya zvehotera. Tora snacks newe kuti uchengetedze mari.
Iwe haufaniri kudhura mari paunenge uchifamba, iwe unongotarisa pazviri nenzira yakarurama uye uronga maererano. Kana iwe uchida kuita kuti kufamba kuve nyore, ita kuti zvive nyore pahomwe yako kutanga.
Iwe Unoshandisa Mari Pazvinhu Zvakaipa
Kushandisa mari pazvinhu zvisina kunaka, nepo zvakanyatsobatana nechokumusoro, chinenge chaicho chakasiyana uye chinoda nyanzvi inokosha. Funga nezvekushandisa mari muzvikomborero, uye nzira dzinobatsira kukubatanidza iwe netsika uye zviitiko zvisingakanganwiki.
Ndinoda kutenga zvigadzirwa zvemukati uye ndine mari iyo kuna Tracy neni kuti tigare mubhuku uye tive newaini. Sei? Kukurukurirana. Vanhu. Kudzidza Nezve tsika. Isu hatisi mhando yekuvhima mahotera mana kana mashanu ehotera kana maresitorendi, uye hatizombofi takabhadhara $ 100 kwekudya kwemanheru kune dzimwe nyika. Nguva dzose. Sei? Tinoda kuita chimwe chinhu nemari iyo inotipa mubayiro, inowedzera kunzwa patinobva.
Apo pane pane zvimwe zvokudya zvatinenge tataura nezvazvo uye tichiyeuka makore shure kwechokwadi, ndicho nguva iwe unorangarira zvakanyanya - ingave iri kupedza nguva muzvisikwa, kutaura nemumwe munhu wausingazivi, kana kuona chimwe chinhu chausina kumboona.
Iwe uri Jet-wakasungwa
Zvichida chinhu chakanyanyisa pasi chinodzivirira vanhu kuti varege kufamba nenzira yavanenge vari kuda kuneta.
Chinokosha chekuti usaneta ndechekudzivisa kudzivisa kuputika. Heuno maitiro aunozviita - usati waenda ndege kuti uende kunzvimbo yako kuenda, sarudza zvose zvaunofunga nazvo kuti nguva yenguva. Kana iwe uchibva kuNew York uye uchienda kuLondon, isa dhora rako, foni yako, yako chinhu chose to London nguva. Kunyange nezvigadziri zvinongogadziriswa, pane nguva dzose inopera mu "zvirongwa" apo iwe unogona kuisa nguva yako.
Tanga kufunga, kuita, uye uzvitende is iyo nguva. Kana ndege yako ichibva kuNew York ku5: 00pm, gadzirira mupfungwa kuti uve 10: 00pm. Funga nezvekuenda kunorara nokukurumidza. Funga pamusoro pazvo kuva nerima. Udza muviri wako kuti uri kutonhora. Mushure mechinguva muchigadzirisa paunenge uchienda, iwe uchazviwana uri kusununguka mune imwe nyika yakasununguka uye muviri wako unopindura panguva inoshanduka. Kuva akakwanisa kuwana dzimwe nguva kurara paunenge uchienda kune imwe nzvimbo kunobvisa pajet-rakakosha zvikuru, uye nepamusoro pezvo iwe wakatove wakagadzirirwa mupfungwa kusvikira nguva yachinja.
Kutonga kwechigunwe ndechokuti zvinotora zuva rimwe nerimwe awa kugadzirisa kusvika nguva kuchinja. Tingawanzogadziriswa rimwe zuva. Tichave takaneta zuva rokutanga, asi isu tichatsvetuka. Basa ratinoita pamberi isu tinobhadhara, uye kamwechete takaita husiku humwe hwekurara panzvimbo itsva, isu tinowanzogadziridzwa uye takagadzirira kuenda.
Uri muHurwere Hwehutano
Izvi zvinonyatsotaura kune mamiriro maviri akasiyana, kana iwe uri kurwara kana iwe hausi mukana chaiwo wepanyama kuti ufambe-famba, ongorora, uye kuona zvaunoda kuona pasina kupera. hapana Zviri nyore kana iwe usingafari zvakanaka kana kuti uine hutano hwakanyanya - kunyanya kufamba.
Kuti tidzivise kurwara pazororo, tinonwa mvura yakawanda sezvatingaita, zorora zvakanaka, kushanda kunze uye kutora mavitamini uye zvigadzirwa zvepanyama izvo zvakakosha kudzivirira masimba asati afamba. Zvimwe zvezvinowedzera zvatinotora nguva dzose zvinosanganisira diatomaceous pasi, inowanzo silica chinhu chinoita kuti ropa realkine uye zvirwere zvinowanzosviba, pamwe ne turmeric, iyo inoshandiswa yekutanga kwehutori hwehutu hunotakura antioxidants. Kana iwe ukawana pasi diatomaceous, iva nechokwadi chokuti chikafu giredha, zvisinei hazvibviri. Iko kusanganiswa kunotichengetedza kuti tirege kurwara, uye tichasimudza mari yatinotora tisati tabuda kunze kwenyika. Kuve muimba yakapoteredza nevanhu vari mungarava refu kunogona kuva nzvimbo yekuzadza yekugovana majekiseni, saka ita nechokwadi kuti unotakura mvura yakachena nemapuranga pamwe chete uye uishandise mushure mekubata masuo emasuo kana kudya.
Mune simba remuviri uye hukama hwakanaka, haufaniri kuva muOlympian kuti ufambe zvakanaka. Iwe unofanirwa, zvakadaro, uve wakakosha maitiro ekuita vamwe kufamba-famba kwenguva yakareba uye uve wakakwana zvokuti utano hwehutano hwemwoyo hunomira kumira. Iko pfungwa huru ndeyekufamba-famba, zvakawanda sezvaunokwanisa, katatu kana kanomwe pavhiki kwe mwedzi mwedzi isati wasvika. Iwe uchave wakanyatsotarisana nekufamba-famba, uchinzwa zvishoma zvishoma, uye unogona kuona zvose zvaunoda kuwona usina kupera simba nokukurumidza!
Wave Uine Zvakaitika Zvakaipa Pamberi
Zvichida chinhu chinonyanya kukosha chokuyeuka ndechokuti hakuna zororo iwe wakambove uripo, uye hapana nzvimbo yawakambove nayo, ine zvakawanda zvine chokuita nerwendo rwauri kuda kutanga. Zvakaitika zvakashata zvinoitika, asi zvakanakisisa kudzidza kubva kwavari uye kuvashandisa kuti vadzidzise pane chii kwete kuti aite panzvimbo yekuwedzera kukurumidza kutsvaga kufamba nekuramba kuva nechiitiko.
Mushure mekufamba kweParis, taigona kumira. Tingave takapedza nyika yedu kuverenga piri, asi isu takatora zvataidzidza, taifamba zvakanaka, uye taifara isu pachedu. Rega izvo zvakapfuura zvive zvakapfuura, uye tsunga kuva neruzivo rwakanakisisa iwe wakambove uine zvimwe zvisinei zvausina kuenda iwe munguva yakapfuura.
Kana ukaita izvi, uye shandisa mazano ari pamusoro apa kutarisa kufamba nenzira itsva, kufamba kuchava nyore uye hapana chichakudzivisa kuona zvakawanda zvenyika uye uine hupenyu hwaunoda kugara mumugwagwa.
Category: Inspirational, Self Improvement, Travel Planning Tags: Harare, Paris, Peru, smart travel, travel tips
← Huku yeSalimbocca
Kwamuri Kuwana Fado Music In Lisbon, Portual →